Lahatsoratra momba an'i Pakistan
Firenena tsy misy visa ho an'i pakistan
Jona 28, 2021 Shubham Sharma Pakistan, Travel, visa ho
Nametraka ny laharana faha-107 ao amin'ny Index Henley Passport i Pakistan amin'ny resaka fahalalahana mandeha amin'ny firenena hafa. Na eo aza ny fametrahan'ity fitaovana ity amin'ny jiro ratsy dia mbola misy ny fanantenana. Afaka miaraka amin'ny pasipaoro pakistaney ianao
Ahoana ny fomba fangatahana Visa any Pakistan?
Febroary 8, 2021 Maitri Jha Pakistan, visa ho
Makà visa ho an'i Pakistan: Mety tsy toerana ao amin'ny lisitry ny dia i Pakistan. Noho ny olana ara-piarovana ho an'ny mpitsidika sy ny mponina. Ireo olana ireo dia nahatonga ny Amerikanina tsy hiditra ao Pakistan. Saingy, mba hisorohana ireo mpizahatany mpizahatany maro
Vidin'ny fandehanana any Pakistan
Desambra 11, 2020 Antika Kumari Pakistan
Any Pakistan, ohatrinona ny fandefasana valizy? Homena anao amin'ny alàlan'ity tatitra momba ny tetibola ity ny valiny rehetra. Fanaparitahana tanàna isan-tanàna, ny vidin'ny fandaniam-bola iraisana, ary ny tolo-kevitra momba ny fampiantranoana ny tetibola. Ao anatin'ny Pakistan,
China Visa Ho an'i Pakistan
Oktobra 20, 2020 Antika Kumari Shina, Pakistan, Travel
Nesorina tamin'ny visa ireo manana pasipaoro diplaomatika pakistaney. Ary mety hijanona mandritra ny 30 andro any amin'ny tanibe Shina ary hatramin'ny 14 andro any Hong Kong SAR any China sy Macao SAR. Ireo tompona pasipaoro ofisialy ao Pakistan dia voahilika tsy ho visa.
Fomba fitaterana any Pakistan
Jona 17, 2020 Antika Kumari mandehana, Pakistan
Ny fitaterana any Pakistan dia midadasika sy maro karazana, saingy mbola eo amin'ny dingana mandroso izy io. Manompo mponina maherin'ny 200 tapitrisa izy. Ny tambajotram-pitaterana any Pakistan dia misy lalambe, lalamby, seranana, fitateram-bahoaka ary serivisy fandefasana. eo ho eo
Pak Jobs, Asa ary asa any Pakistan.
Enga anie 4, 2020 Karuna Chandna asa, Pakistan
MAMPIASA SY FIVORIANA PAKISTAN miaraka amin'ny tari-dalan'ny EXPAT INTERNATIONAL TRANO Vonona hiatrika sy hiasa any Pakistan ve ianao? Sa ianao efa ex-paty ary efa nifindra tany Islamabad, Karachi na tanàna Pakistaney iraisam-pirenena hafa? Mitadiava asa
Hotely mety sy tsara indrindra any Pakistan
Desambra 5, 2019 Maitri Jha trano fandraisam-bahiny, Pakistan
Mitrandraka ary mahita trano fandraisam-bahiny ao Pakistan Nisy zotra taloha teo anelanelan'ny Moyen Orient sy Azia Afovoany, Pakistan dia fonenan'ny olona sy kolontsaina maro hatramin'ny taonjato maro. Ny sisa tavela dia iray amin'ireo firenena mahafinaritra an'i Azia, izay midadasika be
Fahasalamana ara-pahasalamana ao Pakistan
Desambra 4, 2019 Maitri Jha Pakistan
Ny Fandefasana Fahasalamana momba ny fahasalamana (HCDS) dia fandaharana izay manasoa indrindra ny mponin'ny firenena izay manana fizarana ara-pahombiazana tsara, mahomby, ara-drariny, ary vola hahazoana fotodrafitrasa voarindra mba hiroborobo tsara. Eran-tany, ny HCDS dia lasa serivisy mahay mifaninana sy haingana
Ireo tranombarotra tsara indrindra any Pakistan
Desambra 4, 2019 Karuna Chandna Pakistan
Ny fiantsenana no tena fialamboly lehibe indrindra ary mampifaly ny vehivavy ihany koa ny olana iray izay noforonina fa ny vehivavy ihany no tia miantsena. Raha omena toeram-pivarotana lehibe, ny lehilahy dia mirona ho any amin'ny fivarotana. Taona vitsy monja dia lasa i Pakistan
Bank any Pakistan
Desambra 3, 2019 Karuna Chandna Pakistan
Topimaso momba ny banky any Pakistan Ny Banky fanjakan'i Pakistan (SBP) no banky foibe ao amin'ny firenena. Nampidirina tao ambanin'ny lalàna State Bank of Pakistan, 1956. Ny banky foibe no miandraikitra ny fandrindrana ny vola azo antoka ary miantoka ny fahadiovan'ny firenena